အိမ်မှာ အေးအေး ဆေးဆေးပြန်နေ ခံဝန်လေးထိုးပြီ နေဖို့ ပြောလာတဲ့ သူကို အရေးတော်ပုံ မအောင်မချင်းမပြန် ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု…. – Shwe Naung
အိမ်မှာ အေးအေး ဆေးဆေးပြန်နေ ခံဝန်လေးထိုးပြီ နေဖို့ ပြောလာတဲ့ သူကို အရေးတော်ပုံ မအောင်မချင်းမပြန် ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု….
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဆရာဝန်မလေး တစ်ယော က်ဖြစ်သလို ပြည်သူ ချစ် မင်းသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ကလေးဘဝကတည်းက အနုပညာ လောကထဲကို ဝင်ရောက် လာခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အသက် သုံးဆယ် အရွယ်မှာတော့
အကယ်ဒမီဆုကြီး တစ်ဆုကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာ ကို ချစ်မြတ်နိုး ကြတာခြင်း တူတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ကို အနုပညာ အသိုင်းဝိုင်းက သုသု လို့လည်း ချစ်စနိုး ခေါ်ကြပါ သေး တယ်။
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး ကတော့ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုး ကြတာခြင်း တူသူ တွေမို့ ဝါသနာပါရာ အလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီး လမ်းကို အတူ လျှောက် လှမ်းနေ ကြတာပါ။
အနုပညာ လော ကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေကြတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေဟာ လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အားမလျော့ဘဲ ရပ်တည်ကာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာ ကနေ ပါဝင်လျက် ရှိနေ တာကို အားလုံးမြင် တွေ့ရမှာပါ။
ယခုလည်း ပိုင်ဖြိုးသုက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ Facebook မှာ ယခုကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲ ထွက်လာတဲ့ ခံစား ချက်ကို ရေးသားထားတာပါ။“ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးခဲ့မိလို့ မှားသွားပါတယ်…လို့ခံဝန် လေးထိုးပြီး အိမ်မှာ အေးဆေးပြန် နေရမယ်တဲ့လား ….
မိသားစုနဲ့ပြန် တွေ့ရမယ်တဲ့လား…. အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ရ မယ်တဲ့လား…. တချို့တွေ အသက်တွေ ပေးသွားကြပြီ… တချိူ့တွေ ထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြပြီ…. တချိူ့တွေ အားလုံးကို ပစ်ချထားခဲ့ပြီး လက်နက်တွေ ကိုင်နေ ကြရပြီ….
သူတို့တွေ အိမ်ပြန်လို့ မရကြတော့ဘူး … မိသားစုနဲ့ လည်းကွဲကွာ ကုန်ကြပြီ…. သူတို့ချစ်တဲ့ အလုပ်‌တွေလည်း လုပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး….အဲဒီ့လူတွေ ကိုငါရှက်တယ်…. အဖြစ်မရှိ သူဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့ တင်ငါ့အတွက် လုံလောက်ပါပြီ… သစ္စာဖောက် ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တော့အကပ်မခံပါ ရစေနဲ့….
အရေးတော်ပုံ မအောင် မချင်းငါအိမ် မပြန်ဘူး!” ဆိုပြီး ရေးသား ပေါက်ကွဲ ထွက် လာတာလေးကို ပရိသတ် ကြီးအား ပြန်လည်မျှ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ် ကြီးအားလုံးလည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်။
ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးများ…..
ယာယီဥက္ကဌအသစ် ရဲ့ အစည်းအရုံး တွင် မပါဝင် လိုတာကြောင့် ပြည်သူတွေ နဲ့ တစ်သားတည်း မရှိသေအဖွဲ့ဝင် အဖြစ်နှုတ် ထွက်လိုက်တဲ့ မေမြတ်နိုး….
အကိတ်မလေး မေပန်းချီရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..